Dictionnaire malgache et encyclopédie de Madagascar : londonmissionarysociety
Entrée London Missionary Society
Explications en malgache Fikambanana niorina tany London renivohitr' i Angletera tamin' ny 20-25 Septambra 1795...
Ny zava-dehibe fahatelo dia ny nanamboaran' ny misionera niaraka tamin-dRadama ny fiteny malagasy ho azo soratana amin' ny abidia latina tahaka izao. Talohan' izany dia ny tarehin-tsoratra arabo (sorabe) no nanoratana ny fiteny malagasy. Radama sy olom-bitsy foana no nahay izany. Hatramin' izay, ny olona rehetra dia samy nanoratra ny teny malagasy tahaka izao ataontsika izao. Nandahatra ny fitsipi-pitenenana (gramera), nanao diksionera, nanangona ny tantara amana literatiora koa ny misionera... [Ravelojaona 1937 page L386]
Catalogue Madagascar 1885 Cousins William Edward : Ny Ohabolan' ny Ntaolo
1885 Richardson James (Rev.) : A New Malagasy-English Dictionary
1896 Rainandriamampandry : Tantaran-drazana hitadidiana ny fihavanana